Logitech Keys-to-go, fitendry tsy misy tariby hitondra anao any amin'izay | Androidsis
Logitech Keys-to-go, fitendry tsy misy tariby hitondra anao na aiza na aiza
Ny iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra hanararaotana tanteraka ny mety ho takelaka dia ny fampidirana kitendry. Ary raha misy mpanamboatra manjaka amin'ity tsena ity noho ny zavatra niainany dia Logitech izy io. Mitady keyboard tsy misy tariby tsara ho an'ny telefaona Android na takelakao? Aza adino izany fandinihana ny Logitech Keys-To-Go, fitendry tsy misy tariby izay miavaka amin'ny fahazavany ary koa mahatohitra ny vovoka sy ny rano.
1 Logitech Keys-To-Go, fitendry tsy misy tariby hitondra anao na aiza na aiza
2 Ny traikefa fitendry Logitech Keys-To-Go
2.1 Amboaran-tsarin'ny Logitech Keys-To-Go
4 Isa manohana
5 Hevitra manohitra
Hanomboka amin'ny firesahana momba ny fisehon'ny keyboard isika. Miaraka amin'ny refin'ny 24.2 cm ny halavany, 13.7 cm ny haavony ary 6 mm ihany ny hateviny Ny Logitech Keys-To-Go dia fitaovana ahazoana aina sy mora ampiasaina, azo entina na aiza na aiza. Ankoatr'izay, ny lanjany maivana, 180 grama, dia manampy betsaka. Logitech te-hanolotra modely samy hafa amin'ny mainty, mena ary cyan. Raha mitady kitendry manana loko milay sy manintona ianao, mena sy cyan no safidy tsara indrindra. Raha tianao ny piraofilina matihanina kokoa, ny tabilao mainty dia toa tsara eo amin'ny latabatra rehetra.
Madio tsara ny klavier, ny fifandraisana tokana misy dia hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny fitaovana, ary io no mpampitohy USB micro hamenoana ny kitendry, ho fanampin'ny bokotra on / off. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny fahaizan'ny Logitech Keys-To-Go. Ireo lakilema dia zara raha miakatra ambonin'ny tany mamela an'io hatevin'ny 6mm tiako be io. Ankoatr'izay, ny kitendry Logitech Keys-To-Go iray manontolo dia misy a Fonony FabricSkin Mpandroaka rano, izay miaro azy amin'ny famafazana sy ny loto, amin'izay dia afaka diovina amin'ny famafana azy io.
Ny traikefa fitendry Logitech Keys-To-Go
Ny Keys-To-Go dia manana teknolojia mamela ny fanoratana mahafinaritra noho ny habaka misy eo amin'ireo taratasiny na dia tsara dia tsara aza izy. Logitech dia nampiditra andiana lakilà hitsin-dàlana ho an'ny Windows sy Android, ny fomba ahafahana mampiasa multitasking na maka pikantsary, izay manampy ny vokatra sy ny fahafaha-miaina ny zavatra niainan'ny mpampiasa.
Amin'ny voalohany dia sarotra ny mizatra amin'ny refiny, fa rehefa afaka 10 minitra teo ho eo no nampiasaina dia tena tsara ny fahatsapana. Ny mikasika ny lakile dia mahafinaritra ary ny rafitra mekanika dia manamora ny fanoratana. Raha vantany vao nahazatra anao afaka manoratra amin'ny hafainganam-pandeha tsy misy olana ianao. Amin'ny sehatra fisaka dia mandeha tsara ny fitaovana, na dia manandrana mampiasa ny klavier eo am-pofoanao aza ianao dia tsy dia miabo loatra ny fahatsapana ary tsy manome fitoniana firy.
Tombony iray amin'ny maha-mpampiasa Android na Windows Phone anao ny fisian'ny kinova Logitech tsy misy ilana azy ho an'ireo fitaovana ireo miaraka amina fanohanana izay mamela antsika hametraka finday avo lenta sy tablette, hanamora ny fanoratana. Notsapaiko tamin'ny takelaka nahatratra 700 grama ary mbola milamina ny klavier, ka tsy hanana olana ianao rehefa mametraka fitaovana. Farany mariho fa ny Ny kitendry Logitech Keys-To-Go dia manana fiainana batterie mandritra ny 3 volana, Ka tsy hanana olana amin'ny bateria ianao.
Un keyboard tsy misy tariby ho an'ny Android na Windows Phone tena feno izay nahatonga fahatsapana lehibe ho ahy. Raha raisina ny fanoherany ny loto sy ny splashes, endrika mahaliana ary ahitanao azy io Tolotra Amazon latsaky ny 60 euro amin'ny fipihana etoRaha mitady kitendry finday tsy lafo sy maharitra ianao, ny Logitech Keys-To-Go dia safidy tsara dinihina.
Amboaran-tsarin'ny Logitech Keys-To-Go
ny keyboard dia tena mora ampiasaina ary mora entina
Ahitana fijoroana hametrahana ilay takelaka na telefaona
Ny bateria dia manana fizakan-tena mandritra ny 3 volana, tsy azo resena tsotra izao
Ny fonony FabricSkin dia miaro ny kitendry amin'ny tsatokazo
amin'ny lohalika dia tsy afaka miasa loatra ianao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Logitech Keys-to-go, fitendry tsy misy tariby hitondra anao na aiza na aiza
[APK] WhatsApp dia manaraka ny telegram amin'ny fampitomboana ny fetran'ny vondrona ho 256 olona
Mamoaka Cubot S600 maimaimpoana tanteraka izahay amin'ireo mpampiasa Androidsis sy mpanaraka azy